Waa maxay Faraska Trojan? | Fardaha Noti
Carlos Garrido | | Fardo
Inaad ka hadasho fardaha waa inaad ka hadasho aag aad u ballaadhan. Waxaan ka hadli karnaa noocyada kala duwan ee ku jira noocyadan xayawaanka ah, tartamada isboorti ee ay ku jirto jilaaga, labbiskeeda, iwm. Si aad u badan, in farduhu sidoo kale noqdeen jilayaal ka sheekaynaya cilmiga sayniska iyo dhinacyo kale. Tusaale cad oo tan ah ayaa ka badan inta loo yaqaan sida Faraska Troy.
Maqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan wax badan ka ogaanno faraskan gaarka ah, macnihiisa, asalkiisa, iwm.
1 Waa maxay Faraska Trojan?
2 Taariikhda Faraska Trojan
3 Wakiilada farshaxanka ee Faraska Trojan
4 Filimada ku saabsan Faraska Trojan
5 Faraska kale ee Trojan
Waa maxay Faraska Trojan?
Faraska Trojan waxaa loola jeedaa farshaxan weyn, oo ka samaysan alwaax, iyo in Waxaa adeegsan jiray halyeeyadii Giriigga ee dagaalkii caanka ahaa ee Trojan (waxay dhacday xilligii naxaasta ee 1.300 dhalashadii Ciise). Qoraalada ugu da'da weyn ee tixraaca Faraska Trojan waa Homer Odyssey y Virgil's Aeneid.
Dagaalkii la sheegay, Trojans waxay hadiyad ahaan u qaateen Faraska Trojan guushiisii ​​dagaalka. Waxa aysan ogeyn ayaa ah in gudaha ay ku sugnaayeen ciidamo aad u fara badan oo cadaw ah, kuwaas oo si kadis ah u soo weeraray habeenki, iyagoo laayay difaacyadii magaalada. Troy sidaas darteedna, wuxuu sababay dhicitaankii boqortooyadiisa.
Dhab ahaan, weli lama oga haddii jiritaanka Faraska Trojan uu run ahaa. Kuwo badan ayaa xaqiijinaya in aysan waligeed noqonin wax la taaban karo, laakiin, dhinaca kale, waxaa jira kuwa kale oo caddeeya inay dhici karto nooc mashiin militari ah oo lagu baabtiisay magacaas.
Runtu waxay tahay inay u noqotay isha lagu ilhaaminayo qaybo suugaaneed iyo farshaxanno fara badan.
Taariikhda Faraska Trojan
Isku daygiisii ​​aan kala joogsiga lahayn ee uu ku galay magaalada Troy, Odysseus wuxuu amar ku bixiyay dhismaha faras alwaax weyn in ay qaadi karto tiro cayiman oo ka tirsan ciidanka Griiga.
Epeo waxaa loo xilsaaray inay dhisto shaqadan oo kale, iyo 39 dagaalyahano iyo Odysseus laftiisa ayaa la soo bandhigay. Dagaalyahanada intiisa kale waxay faraskii iyo asxaabtoodii kaga tageen irdaha hore ee magaalada Troy iyagoo ujeedkoodu ahaa inay Trojans rumaysan doonaan inay ahayd hadiyad micnaheedu yahay ka bixitaanka ninka la tartamaya. Istaraatiijiyadduna si wanaagsan ayey u dhacday.
Isla habeenkaa, Trojans ayaa si sharaf leh faras weyn u soo geliyay magaaladooda, iyagoo aan ogeyn in qof walba markuu seexdo, dagaalyahannada Griigga ay ka soo dhex bixi doonaan dhismaha oo ay bilaabi doonaan inay weeraraan
Wakiilada farshaxanka ee Faraska Trojan
Taariikhda oo dhan, inbadan waxay ahaayeen dhaqammadii iyo ilbaxnimooyinkii isku dayay inay matalaan, hal dhinac ama mid kale, Faraska Trojan.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah sawirada ugu da'da weyn ay tahay mid ka muuqda waxa loogu yeero Muraayadda Mykonos shukaansi ka qarnigii XNUMXaad BC iyo fibula naxaas ah ka tirsan Muddo Qadiim ah. Kuwani waxaa lagu daray qaybo dhoobada ka sameysan ah Athens iyo Tinos. Oo waxay ku jirtay Giriigga Caadiga ah halkaas oo faraskan quruxda badan uu ku helay muhiimad iyo muhiimad dheeraad ah, maadaama maacuun fara badan sida muraayadaha indhaha, taarikada, dahabka, rinjiyeynta lagu qurxiyay muuqaalkiisa ... Stongilion, lagu rakibay meesha barakaysan ee Artemis Brauronia of acropolis, oo ay weli jiraan qaar hadhay.
Intaas waxaa sii dheer, iyo sidaan horayba u soo sheegnayba, faraskan iyo kaalintiisa taariikhda Dagaalkii Trojan wuxuu u adeegay sidii shaqooyin dambe, isagoo tilmaamaya taxanaha uu saxeexay Juan José Benítez.
Wadar ahaan toban buug, Benítez, qoraa Isbaanish ah, wuxuu sheegayaa sida howlgalka loogu magac daray "Trojan Horse" uu u dhacay, kaas oo ka koobnaa socdaal lagu tagi doono waagii hore si aan goob joog uga ahaano dhacdooyin gaar ah oo ku saabsan nolosha Ciisihii Reer Naasared si ay u sharxaan. Waa in la ogaadaa in buugaagtani ay abuureen khilaaf weyn, maadaama, ilaa xad, ay isku khilaafeen caqiidooyinka diimeed ee soo jireenka ah.
Filimada ku saabsan Faraska Trojan
Sida iska cad, iyo sida caadiyan u dhacda inta badan kiisaska, adduunka shineemo kuma cusba sheekada Faraska Trojan waxayna ku guuleysatay inay u keento shaashadda weyn.
Filimka "Troy", oo uu agaasime ka yahay Wolfgang Petersen isla markaana ay jilayaan Orlando Bloom iyo Brad Pitt iyo kuwo kale, ayaa ka warramaya wixii ka dhacay dagaalkii Troy, kuna saleysan wixii lagu aasaasay maansada taranka ee Ilyaasku. Iyo, dabcan, dhexdiisa faraskii weynaa ee alwaaxda ahaa ee ay hindisay Giriiggu wuxuu fadhiyaa meel caan ah.
Faraska kale ee Trojan
Faraska Trojan sidoo kale waa barnaamij ama barnaamij kumbuyuutar oo ka shaqeeya sharaf u ah awoowgiis. Magac ahaan, Fayraskani wuxuu ku dhacaa gudaha kumbuyuutarka wuxuuna si toos ah u burburiyaa inta ka hartay barnaamijyada la rakibay wuxuuna si toos ah u helayaa macluumaad kala duwan iyo waxyaabaha ku jira nidaamka, ku dhowaad waxba!
Si loo aqoonsado, waxaan dheg u noqon karnaa calaamadaha kala duwan ee naga dhigaya inaan ku aragno dabeecad aan caadi ahayn kombuyuutarkayaga, sida: farriimaha lagu daray daaqadaha aan caadiga ahayn, gaabiska nidaamka qalliinka, feylasha waa la tirtiray lana beddelay, iwm..
Haddii aan dooneyno inaan ka hortagno weerarka fayraskan, waa inaan hubnaa taas leeyihiin antivirus wanaagsan oo ha ku rakibin barnaamijyo ka socda boggag aan la aqoon.
Waxaan rajeynayaa inaan awooday inaan kaa caawiyo inaad waxbadan ka barato Faraska Troy Oo markay iyadu waxyaalo qaarkood iyagii ogaatay oo ay dhici karto, inayna garanaynin,
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Faraska Troy